GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bislama Bissau Guinean Creole Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Roman) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Tetun Dili Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wolof Xhosa Zulu
Ịkọ mmadụ ọnụ. Otu nwa agbọghọ dị́ afọ iri abụọ aha ya bụ Celine sịrị: “Ụmụ nwaanyị nwere ọnụ ọjọọ. Enweghị m ike ichefu aha ndị ha kpọrọ m ma ọ bụ ihe ndị ha kwuru. Ha mere ka m yie onye na-abaghị uru, onye a jụrụ ajụ, nakwa onye iberiibe. Ọ gaara akara m mma ma a sị na ha tiri m ihe.”
Ịkpapụ mmadụ iche. Nwa agbọghọ dị́ afọ iri na asatọ aha ya bụ Haley kwuru, sị: “Ụmụ akwụkwọ anyị malitere ịgbara m ọsọ. M bịa ka m soro ha nọrọ na tebụl rie nri, ha anọchie ebe niile ka m ghara iso ha nọrọ. N’afọ ahụ niile, m na-ebe ákwá, e nweghịkwa onye mụ na ya na-anọ eri nri.”
Isi n’Ịntanet achọ okwu. Nwa okorobịa dị́ afọ iri na anọ aha ya bụ Daniel kwuru, sị: “Naanị obere ihe mmadụ dere na kọmputa zipụ n’Ịntanet nwere ike imebi aha mmadụ ma ọ bụdị kpata nnukwu nsogbu. O nwere ike ịdị ka ihe na-enweghị ike ime eme, ma ọ na-eme.” Iji ekwentị ezipụ foto ma ọ bụ ozi ndị na-adịghị mma sokwa n’otú e si eji Ịntanet achọ mmadụ okwu.
A chọrọ hanwa okwu. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Antonio kwuru, sị: “Otú ndị ọgbọ m si na-emesi m ike mere ka ike gwụ m, mụ amalitezie ịchọ ndị ọzọ okwu ka ndị ọgbọ m nwee mmasị n’ebe m nọ. M mechara chọpụta na ihe ahụ m mere adịghị mma.”
Ha mụtara ya n’aka ndị ọzọ. N’akwụkwọ Jay McGraw dere, nke a na-akpọ Life Strategies for Dealing With Bullies, ọ sịrị: ‘Ọtụtụ mgbe, ihe mere ndị na-eto eto ji achọ ndị ọzọ okwu bụ na ọ bụ otú ahụ ka nne ha na nna ha, ụmụnne ha ndị tọrọ ha, na ndị ọzọ nọ́ n’ezinụlọ ha si emeso ibe ha.’
Ha na-eme ka ha siri ike, ma ụjọ na-atụ ha. N’akwụkwọ Barbara Coloroso dere, nke a na-akpọ The Bully, the Bullied, and the Bystander, o kwuru, sị: “Ụmụaka ndị na-achọ okwu na-eme ka ha ka ndị ọzọ mma iji kpuchie obi ọjọọ na-eme ha nakwa ụjọ ji ha/Obi anaghị adị ụmụaka ndị na-achọ okwu mma. Ọ bụ ya mere ha ji achọ okwu ka obi wee dị ha mma.”
Emela ka ihe ha na-eme ọ̀ na-ewe gị iwe. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Kylie kwuru, sị: “Obi na-adị ndị ọchọ okwu ụtọ ma ha mata na ha emeela ka iwe wee gị. Ma, ọ bụrụ na i mee ka ihe ha na-eme ewuteghị gị, ha ga-akwụsị ịchọ gị okwu.” Baịbụl kwuru, sị: “Onye nzuzu adịghị ejide mmụọ ya ma ọlị, ma onye maara ihe na-ejideru ya n’isi.”​—Ilu 29:11.
E megwarala ha. Imegwara ha agaghị eme ka ha kwụsị ịchọ gị okwu, kama ọ ga-eme ka ha na-achọsikwu gị okwu ike. Baịbụl kwuru, sị: “Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ.”​—Ndị Rom 12:17; Ilu 24:19.
Gbaara nsogbu ọsọ. Gbaa mbọ na-ezere ndị ọchọ okwu. Agala ebe ha nwere ike ịchọ gị okwu. Emekwala ihe ga-eme ka ha chọọ gị okwu.​—Ilu 22:3.
Mee ihe ha na-atụghị anya ya. Baịbụl kwuru, sị: “Azịza dị nro na-eme ka ọnụma laa.”​—Ilu 15:1.
Were ya ka egwuregwu. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na onye na-achọ gị okwu kọrọ gị ọnụ na i buru oké ibu, i nwere ike ịmụmụ ọnụ ọchị, sị ya: “Ọ dị ka ị̀ ma na m kwesịrị ifelatatụ.”
Si ebe ahụ pụọ. Otu nwa agbọghọ dị́ afọ iri na itoolu aha ya bụ Nora kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ị gba nkịtị, ọ ga-egosi na ị ma ihe nakwa na ị ka onye ahụ ike. Ọ ga-egosikwa na ị na-ejide onwe gị, bụ́ ihe onye ahụ na-achọ gị okwu na-agaghị emeli.”
Gbaa mbọ ka ị ghara ịna-atụ ụjọ. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Rita kwuru, sị: “Ndị ọchọ okwu na-ama mgbe ahụ́ na-erughị gị ala. Ha nweziri ike chọwa gị okwu mgbe ahụ ka ha menye gị ụjọ.”
“Agala ebe e nwere ike ịchọ gị okwu ma ọ bụ mee ihe nwere ike ime ka ọ dịrị ndị ọchọ okwu mfe ịchọ gị okwu. Cheta na ndị ọchọ okwu nwere nsogbu ndị ha na ha na-alụ. Ọ bụrụ na i buru ya n’obi, ọ ga-eme ka ihe ha gwara gị ghara iwute gị.”​—Antonio.
“Na-akata obi. Ụjọ atụla gị ịgwa ndị ọzọ ihe i kweere. Ndị ọchọ okwu ga-akwụsị ịchọ gị okwu ma ha hụ na ihe ha na-eme anaghị ewe gị iwe nakwa na ị naghị atụ ha ụjọ.”​—Jessica.
“Ndị a chọrọ okwu anaghị achọ ịgwa ya ndị ọzọ n’ihi na ụjọ na-atụ ha na ndị ọchọ okwu ahụ ga-emesikwu ha ike ma ọ bụ na ụmụ klas ha ga-ele ha anya ọjọọ. Ha nwekwara ike ịna-eche na e nweghị otu a ga-esi kwụsị okwu ahụ a na-achọ ha. Ma, m na-agba onye ọ bụla a chọrọ okwu ume ka ọ gwa ya ndị ọzọ. Ọ bụ ihe onye ahụ kwesịrị ime, o nwekwara ike ime ka ndị ọchọ okwu ahụ ghara ịchọ ndị ọzọ okwu.”​—Jenilee. Ọ na-akụzibu n’otu ụlọ akwụkwọ dị́ n’Amerịka.
Eziokwu. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru banyere ndị a kpọrọ ndị Nefilim. Aha a bụ Nefilim pụtara “Ndị Na-akwatu Ndị Ọzọ.”​—Jenesis 6:4.
Eziokwu. Ọ bụrụ na e nyere ndị ọchọ okwu aka, ha nwere ike ịgbanwe àgwà ha na otú ha si eche echiche.​—Ndị Efesọs 4:​23, 24.
Lee ihe mere ndị mmadụ ji achọ okwu na ihe ị ga-eme ma a chọọ gị okwu.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme Ma A Chọwa M Okwu?
ijwyp isiokwu 12